Pnud : Hamoaka fifanarahana ho an’ny mpanao politika -
AccueilRaharaham-pirenenaPnud : Hamoaka fifanarahana ho an’ny mpanao politika
23/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vita omaly ny atrikasa nokarakarain’ny Pnud sy ny minisiteran’ny Atitany ho an’ireo mpanao politika sy ny antoko politika eto amintsika, mba hisian’ny filaminana sy fandalana ny demokrasia eto Madagasikara, natao teny amin’ny Carlton. Miompana amin’ny fomba amam-panao amin’ny fanaovana politika eto Madagasikara ny dinika natao. Ny resaka politika eto amintsika mantsy dia saika bahanan’ireo antoko politika madinika izay faly mitady seza sy mameno paosy fotsiny fa tsisy foto-kevitra ijoroana mihitsy mba hampandrosoana ny firenena. Ny fisian’ity atrikasa ity dia dingana iray mankany amin’ny fanatsarana ny fomba fanaovana politika eto amintsika. Ny tanjona dia ny mba hisy ny fametrahana fepetra manokana amin’ny fanaovana politika. Mety hisy araka izany ny fifanarahana ho an’ny mpanao politika havoakan’ny Pnud ato ho ato. Inona no fomba atao mba tsy hisy ny famadibadihana palitao, sy loko politika. Foanana ny hoe mahaleotena, tokony ho olona avy amin’ny antoko politika ara-dalàna ihany no afaka mandray anjara amin’ny fifidianana. Asiana fepetra manokana ny fahafahana milatsaka ho Filoham-pirenena. Izany hoe efa mitsinjo lavitra ny fanjakana amin’ny hiatrehana ny fifidianana amin’ny 2018.
Antoko politika maherin’ny 20 sy parlemantera maromaro no nandray anjara tamin’izany. Tafiditra tao anatin’izao nomena fanamafisana traikefa izao ihany koa moa ny mpikirakira ny haino aman-jery, ny mpitarika fivavahana sy ny nentim-paharazana, ny fiarahamonim-pirenena, mba hanjaka ny fitoniana ary voahaja ny demokrasia amin’ny fotoana hanaovana ny fifidianana. Raha mihoatra amin’ireo voalaza fa 281 no isan’ny antoko politika eto amintsika misoratra amin’ny rejistran’ny minisiteran’ny Atitany dia tsinontsinona ireo 20 mahery ireo. Nilaza moa ireo mpandray anjara fa mba tsy olona vao hianatra hanao politika sy hianatra fitantanana ny firenena, tsy olona mpivadibadika palitao no tokony omena andraikitra eto amin’ny firenena fa mba olona manana ny fahaizana sy ny fahalalana ary traikefa amin’izany ihany satria hiteraka fitohanan’ny fampandehanan-draharaha, sy mampandringa ny fampandrosoana ny olona tsy mahafeno ny fepetra takiana amin’izany. Ny zavatra rehetra nangatahana tamin’ity atrikasa ity ihany koa dia natao ho arofanina ho an’ny mpanao politika rehetra eto amin’ny firenena.
Nandray ny filoham-pirenena Indianina, Ram Nath Kovind ny oniversiten’Antananarivo, omaly. Fitsidihana farany nataon’ity Filoha ity namaranana ny diany eto Madagasikara. Voatsidika nandritra izany ny fampianarana hampitain-davitra, entina nanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fametrahna ny teknolojia ...Tohiny